China oem bristles ibrashi encinci ibrashi yamazinyo intloko mveliso kunye nabenzi | Enyuan
Le mveliso inokusekwa kwimibala eyahlukeneyo, kwaye intloko yebrashi iyinto entle, enokungena ngokulula kumngxunya womlomo. Iibristles zebrashi yamazinyo ethambileyo zilungiswe ngokuxineneyo, ezinokucoca umsantsa ngokunzulu
Igama lemveliso ibhrashi yamazinyo ethambileyo
Izinto zokubamba ibrashi iphepha + tpe
Intloko yebrashi yale mveliso ilungile, i-bristles ilungile, ukuxinana okuphezulu kokuxinana, okucwangciswe ngokuxineneyo ukucoca amazinyo. Iifilamenti zebrashi zincinci kwaye zithambile, zizisa amava amatsha oxinzelelo lweAijie. Izibambo zebrashi zahlukile, kwaye uyilo olungatyibiliki lukhuselekile kwaye lusondele ekusebenziseni.
Indlela efanelekileyo yokuhlamba amazinyo
Indlela yokukhetha kunye nebrashi amazinyo asezantsi ukusuka ezantsi phezulu; amazinyo angaphambili Ukusuka kwicala elingaphakathi, yima ibhrashi yamazinyo kulwimi ejonge kwicala lomphezulu we-occlusal; hlamba umphandle wangaphakathi, wangaphandle kunye ne-occlusal kwincam yezinyo. Ngokumalunga nexesha lokuxubha, ngokubanzi imizuzu emi-3 ibhetele, ukuze kubekho ixesha elaneleyo lokuxubha onke amalungu amazinyo. Abanye abantu ngaphandle kwe-China bacebise "inkqubo yesithathu-ntathu yesithathu" yokuxubha amazinyo, oko kukuthi, ukuxukuxa amazinyo kwisithuba semizuzu emi-3 emva kokutya oku-3, kunye nokuxubha amazinyo imizuzu emi-3 ngalo lonke ixesha. Ewe, ukuxubha amazinyo kusasa nangokuhlwa kunye nokuhlamba umlomo emva kwesidlo kwanele ngokwaneleyo. Ngamafutshane, ukuqonda indlela echanekileyo yokuxubha kunokukhusela ngokufanelekileyo amazinyo kunye nezicubu zexesha, ukuze amazinyo akho abe nokusebenzela impilo yakho.
Egqithileyo Isibini semisonto ethambile ibristles ibhrashi yamazinyo
Okulandelayo: Ibrashi yamazinyo ebunjiweyo yamalahle
Iseti yebrashi yamazinyo